Delta Injineer shirkadda abuurista taariikhda
Waxbadan ka baro annaga iyo shirkadeena
Delta Injineerinka waxaa la aasaasay 1992 waxaa sameeyay Danny De Bruyn iyo Rudy Lemeire, oo labaduba injineer ka shaqeeya soo saarista dhalada caaga ah.
Markii ay arkeen la'aanta qalab wax ku ool ah oo wax soo saar leh, waxay bilaabeen naqshadeynta iyo soo saarista UDK100, oo ah hal tijaabo oo madax ka daata.
Bilaha iyo sanadaha soo socda, waxay si aad ah ula ekaayeen baahiyaha macaamiishooda, taas oo si dhakhso ah ugu horseeday horumar dhinacyo badan oo xalalka lagu xallinayo dhibaatooyinka dhabta ah ee shirkadaha maanta jira.
Habkaan gacan-ku-haynta ah wuxuu u sahley Delta Injineerku inuu ka sameeyo jago horudhac ah warshadaha. Maanta Delta Engineering wuxuu tiriyaa kooxo fara badan oo caalami ah, iyo sidoo kale shirkado yar yar oo madax banaan oo ka tirsan macaamiisheeda.
Waxaan horumarinaa firfircoonaantaada
Waxaad tilmaamaysaa tayadeena
Himiladeena ayaa ah inaan soo saarno xalka lagama maarmaanka u ah inaan awood ugu siino macaamiisheena inay kala soocaan kuwa kale. Macaamiisheenna ayaa howshooda u adeegsada, shaqada, sheyga baakadaha iyo kharashaadka gaadiidku waa kuwa KPI-ga marka aan sameyneyno mashiinno iyo xalal cusub.
Sideen ku xaqiiqsan karnaa tirada badeecadayadu? Iyada oo lala kaashanayo adiga, macaamiisheena: jawaab celintaada muhiimka ahi waxay noo oggolaaneysaa inaan hagaajino oo aan hagaajino alaabadayada. Muhiimadda ugu weyn ee aan u leenahay guul-gaarista: dadka ka shaqeeya meheraddayada iyo kartidooda hal abuurka leh. Hadafkayagu waa inaan gaarno qanacsanaanta macaamiisha iyada oo loo marayo heer sare ah qaabeynta qaab tayo sare leh, xalal tayo leh, warshadeyn, rakibida iyo ka dib iibka dekeda. Iyada oo loo marayo dhaqankeena, wadiskeena iyo khibradeena shaqaale kasta oo shaqsi ah, waxaan si gaar ah ugu leenahay boos aan kula daboolno dalabaadka macaamiisheena adduunka.